Foollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti – Kichuu
[ July 25, 2021 ] Breaking ! The Sidama National Liberation Front (SNLF) Deplores Another Deployment	Africa
[ July 25, 2021 ] ክተት Jechuun sun isa kanadhabar!!	News
[ July 25, 2021 ] What is happening in Bole International Airport	Africa
[ July 25, 2021 ] አንድ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ያወጁት የዚህ ፋሺስታዊ አገዛዝ ቁንጮና አጋፋሪዎቹ በፍትህ አደባባይ ቆመው ቅጣታቸውን የሚቀበሉበት ቀን ሩቅ አይደለም።	Amharic
[ July 25, 2021 ] Tigray Ethiopia: Eritrea -Woldiya town -Gondar city	Africa
[ July 25, 2021 ] Abdishaa wallaga kantiiba jimmaa godhuufi ?.	Videos
[ July 25, 2021 ] The Neftegna’s government in Oromia, Is playing with Oromo’s sons and daughters blood.	Videos
HomeAfaan OromooNewsFoollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti
Foollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti
Foollee- Foolleen maal? Akka Gadaa Oromoo Maccaa fi Tuulamaatti Foolleen dargaggoota gannaa 16-24 keessa jiran. Isaan kunneen akka Gadaa Oromoo Booranaatti warra Gaammee Guguddaa jedhaman.
Dardaroonni sadarkaa Gadaa Foollee keessa jiran adamoo adamsuu (bineensi akka horii hin nyaane ittisuu) akkasumas barumsa waraanaa fi ispoortii kkf. baratu, biyya irra deemudhaan sirbaa, foollisaa saba maraan wal baru;yeroo kana keessattis dirqama hojii ittisa naannoo bahatan qaban. Hojiin isanaii guddaan sirna, naamusaa fi tasgabbii naannoo eegsisu.
Foolleen dirqama biraas ni qabu; yeroo Buttaan qalamu foolleetu korma kuffisee qaba. Cinaacha korma buttaa akkuma jirutti foolleetu fudhata. Foolleen foon buttaa akka leencaattii wal harkatti ciree nyaata. Yoo sirni buttaa jalate (seera irraa gore) foolleen korma hin kuffisu, foonis hin nyaadhu jechuuf mirga qaba (fkn namichi buttaa qaluu fedhe nama seera cabsee yoo ta’e). Foollee malee immoo buttaan hin qalamu.
Foolleen seera malee nama hin sodaatu, waan jedhuu fedhe, saalfii tokko malee sirbaan ibsa. Foollisaa, yoo fedhe abbaa Gadaa ni faarsa (seera tolchuu irrati jabaa yoo ta’e) ykn niabaara (seera yoo cabse). Dhiisi jedhama malee hinadabamu.
Foolleen nama aadaa cabse, nama nagaa naannoo booresse, nama sirnaa fi duuadhaa irraa gore qaanessuun sirnaa fi naamusatti akka deebi’u taasisa. Fakkeenyaaf, yoo dargaggoon tokko seeraan ala deeme, seera cabse mala ittiin adaban qaban. Nama badii dalage san jalaa huccuu fuudhanii ciruun ulee isaaniitti hidhanii itti sirbu. Yeroo eenyummaan nama sanaa beekamu, jaarsa baasee adabbii fudhatee akka qoqqobbiin irraa ka’u kataa lammii iyyata. Akkanaan deebi’ee hawaasatti dabalama.
Sadarkaa Gadaa Foollee keessati dargagoon sirritti biyyas walis baruun akka sirni, aadaa, naamusti fi tasgabbiin eegamu taasisu. Akka raayyaa waraanatti Gadaa jalatti kan ajajamanii dha. Gadaaf ni ergamu, loon bade ni barbaadu, bishaan ni obaasu. Warra Gadaa akka abbaa isaanitti gargaaru dha. Kanaaf Gadaan gaafa gadooma isaa damma qopheessee laataaf
Read more: http://www.oromedia.net/gadaa/gadaa-oromoo-tuulamaa/
Ethiopia is accused of kidnapping its OWN citizens who’ve sought refuge
Over 10,000 Oromos who were displaced from Wuchale town and confined
Abdishaa wallaga kantiiba jimmaa godhuufi ?.
The Neftegna’s government in Oromia, Is playing with Oromo’s sons and daughters blood.
vThe respected and bloody people of Somalia closed the road that used to come from Djibouti and Ethiopia.
The Amhara party of NAMA’ has called the Amhara people to ‘ stay in one place ‘ like this ‘ the enemy of TPLF.
The Amhara people answered the call of their ‘president’ that all people can take the weapons to fight.